Wararka - Tilmaamaha kaydinta iyo isticmaalka baytariyada lithium ee loo yaqaan 'walki-talkies' iyo kuwa soo noqnoqda
Tilmaamaha kaydinta iyo isticmaalka baytariyada lithium ee loogu talagalay socod-hadallada iyo soo-celinta
A. Tilmaamaha kaydinta baytariga Lithium
1. baytariyada lithium-ion waa in lagu kaydiyaa meel degan, qalalan, hawo leh, oo ka fog dabka iyo heerkulka sare.
Heerkulka kaydinta baytarigu waa inuu ahaadaa inta u dhaxaysa -10 °C ~ 45 °C, 65 ± 20% Rh.
2. Kaydinta tamarta iyo tamarta: danabku waa ~ (nidaamka tamarta caadiga ah);Awoodu waa 30%-70%
3. Baytariyada kaydinta wakhtiga dheer (in ka badan saddex bilood) waa in la geliyo deegaan leh heerkul 23 ± 5 °C iyo huurka 65 ± 20% Rh.
4. Batteriga waa in lagu kaydiyaa si waafaqsan shuruudaha kaydinta, 3dii biloodba mar si loo dallaco oo loo dallaco, oo lagu shubo 70% awood ah.
5. Ha rarin batteriga marka heerkulku ka sarreeyo 65 ℃.
B. Tilmaamaha baytariyada lithium
1. Isticmaal dabaylaha khaaska ah ama ku dalac mishiinka oo dhan, ha isticmaalin dabaylaha la bedelay ama dhaawacmay.Isticmaalka alaabada hadda sare ku dallacaadda danabkoodu sarreeyo waxay u badan tahay inay keento dallacaadda iyo soo saarista waxqabadka, sifada makaanikada, iyo waxqabadka badbaadada unugga baytariga, waxayna u horseedi kartaa kuleyl, daadid, ama bararo.
2. Batteriga Li-ion waa in lagu dallaco 0 °C ilaa 45 °C.Marka laga soo tago kala duwanaanta heerkulka, waxqabadka batteriga iyo nolosha waa la dhimi doonaa;waxaa jira barar iyo dhibaatooyin kale.
3. Baytariga Li-ion waa in lagu sii daayo heerkulka deegaanka laga bilaabo -10 °C ilaa 50 °C.
4. Waa in la ogaadaa in muddada dheer ee aan la isticmaalin (in ka badan 3 bilood), baytarigu waxa laga yaabaa inuu ku jiro xaalad xad-dhaaf ah oo gaar ah sababtoo ah sifooyinka is-dejinta.Si looga hortago in ay dhacaan xad-dhaaf ah, batteriga waa in si joogto ah loo dallacaa, iyo in danabkiisa lagu ilaaliyo inta u dhaxaysa 3.7V iyo 3.9V.Dheejinta xad dhaafka ah waxay horseedi doontaa luminta waxqabadka unugga iyo shaqada batteriga.
C. Fiiro gaar ah
1. Fadlan ha dhigin baytariga biyaha ama ha qoyin!
2. Waa mamnuuc in batteriga lagu dallaco dab ama xaalad aad u kulul!Ha isticmaalin hana ku kaydin baytariyada meel u dhow meelaha kulaylka (sida dabka ama kuleyliyeyaasha)!Haddii batarigu soo daato ama ursado, isla markiiba ka saar dabka furan agtiisa.
3. Marka ay jiraan dhibaatooyin ay ka mid yihiin bararka iyo batteriga oo daadanaya, waa in isla markiiba la joojiyo.
4. Haku xidhin baytariga si toos ah godka gidaarka ama godka sigaarka ee baabuurka lagu rakibay!
5. Ha ku tuurin baytariga dabka, ha ku dilin baytariga!
6. Waxaa reebban in la gaabsado electrodes-ka togan iyo kuwa taban ee baytariyada ee fiilooyinku ama walxo kale oo bir ah, waxaana reebban in lagu raro ama lagu kaydiyo baytariga silsilado, timo-timo iyo walxo kale oo bir ah.
7. Waa mamnuuc in qolofka batteriga lagu muday ciddiyo ama shay kale oo af leh oo aan dubbe ama ku talaabsanayn baytariga.
8. Waa mamnuuc in la garaaco, la tuuro ama la keeno batari si farsamaysan loo gariiro.
9. Waa mamnuuc in batteriga si uun loo dumiyo!
10. Waa mamnuuc in bateriga la geliyo foornada microwave-ka ama weelka cadaadiska!
11. Waa mamnuuc in lagu daro baytariyada aasaasiga ah (sida baytariyada qalalan) ama baytariyada awoodaha kala duwan, moodooyinka iyo noocyada kala duwan.
12. Ha isticmaalin haddii batarigu uu soo saaro ur xun, kulayl, qallafsanaan, midab ama wax kasta oo kale oo aan caadi ahayn.Haddii batteriga la isticmaalo ama uu ku dallacay, ka saar qalabka ama dabaylaha isla markaaba jooji isticmaalkiisa.